တွစ်တာကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လုပ်နည်း - တွစ်တာ - 2019
ရေနွေးငွေ့အတွက်ဂိမ်းကိုဝယ်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ရုံငွေပေးချေမှုစနစ်၏နီးပါးမဆိုတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်ဘဏ်ကဒ်အဖြစ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဂိမ်းဝယ်မရနိုင်လျှင်ပြုပါသလော အဆိုပါအမှားတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, မည်သည့် web browser ကို အသုံးပြု. လမ်းဖွင့်လျက်, client ကိုရေနွေးငွေ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများမကြာခဏ Valve ကနေရာသီအလိုက်အရောင်းစဉ်အတွင်းဤပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ အများဆုံးမကြာခဏဂိမ်းဝယ်ယူများ၏မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများကိုကြည့်ကြရအောင်။
ဖြစ်ကောင်းတိုင်းအသုံးပြုသူအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ရေနွေးငွေ့ပေမယ့်အမှားများ၏လုပျငနျးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ငွေပေးချေ၏အမှား - အရှိဆုံးမလဲပြဿနာများ၏တဦးတည်း၎င်း၏အကြောင်းမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုခက်ခဲသည်။ အောက်တွင်ကျနော်တို့အများဆုံးမကြာခဏပေါ်ပေါက်သောအခြေအနေများမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိုပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Update ကို client ကိုဖိုင်တွေ
သင် client ကိုအပေါ်တစ်ဦးဝယ်ယူစေမနိုင်ပါကပျက်စီးပြီဖိုင်များကိုများ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်လိုအပ်သောအချို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းရေနွေးငွေ့တည်ငြိမ်ပြီးဒုက္ခ-အခမဲ့ခွဲစိတ်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ ထို့ကြောင့်, developer များအခွအေနဖြေရှင်းပေးရန်နှင့်အဖြစ်မကြာမီတစ် bug ကိုရှာတွေ့အဖြစ် updates များကိုလွှတ်ပေးရန်ဖို့ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဤအ updates များကိုတစ်ဦးစဉ်အတွင်းနှင့်ဖိုင်များပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် update ကိုမပြီးဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအမှားဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ထိုအခါအဆိုးဆုံး-ကိစ္စတွင်မြင်ကွင်း - စနစ်ကူးစက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအပလီကေး exit ရမယ်ကြောင့် install လုပ်ပြီးသားသည်အဘယ်မှာရှိဖိုင်တွဲသွားပါ။ default ရေနွေးငွေ့သည်ဤလမ်းကြောင်းကိုမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
ကို C: Program Files ရေနွေးငွေ့။
ဖိုင်တွေ မှလွဲ. ဒီ folder ကိုအပေါငျးတို့သ contents တွေကို Remove Steam.exe နှင့်ဖိုင်တွဲများ Steamapps ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသားသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားဂိမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်တော်မမူကြောင်းသတိပြုပါ။
, antivirus ကိုသင်သိကြမဆို အသုံးပြု. ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် system ကိုစစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။
Method ကို 2: ကွဲပြားခြားနားသောဘရောက်ဇာကိုသုံးပါ
ဒီအမှားမကြာခဏ Google Chrome ကို, အော်ပရာ (နှင့်ခရိုမီယမ်အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကတခြား browser များ) ၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့အတူ။ ဒီအကြောင်းပြချက်မဏိမေနှင့် DNS-server ကို setting များကို (အမှား 105), cache ကိုအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ် cookies များကိုပြုမူနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများကွန်ယက်ဆော့ဖျဝဲကို update ၏ရလဒ်အဖြစ်, ဘရောက်ဇာကိုတဖနျ, system ကိုရောဂါကူးစက် add-ons, ဒါမှမဟုတ် install ပေါ်ထွန်း။
သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးကို Web browser များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆက်လက်ချင်လျှင်, သင်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုနှင့်ဤညွှန်ကြားချက်အတွက်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်:
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် DNS ဆာဗာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကို configure လုပ်နည်း
Google Chrome ကသင်၌ cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျထိုပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မလိုချင်ကြဘူးလျှင်, ကွဲပြားခြားနားသောဘရောက်ဇာနှင့်အတူဂိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုးစား။ သင်နှင့်အတူတစ်ဦးဝယ်ယူစေနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအများဆုံးဖွယ်ရှိသည် က Internet Explorer7သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းက Internet Explorer စွမ်းအားဖြင့်မူလကရေနွေးငွေ့အဖြစ်။ သင်တို့သည်လည်း Mozilla Firefox ကိုသုံးပြီးကြိုးစားနိုင်ပါ။
တရားဝင်ရေနွေးငွေ့ site ပေါ်တွင်ဂိမ်း Buy
Method ကို 3: ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုပြောင်းနည်း
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်ကို အသုံးပြု. ဂိမ်းများအတွက်ပေးဆောင်ရန်ကြိုးစားသောအခါမကြာခဏဆိုသလိုဤပြဿနာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဏ်မှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုလုံလောက်သောရန်ပုံငွေရှိပြီးသူတို့ကဂိမ်း၏စာရင်းစျေးနှုန်းထားတဲ့အတွက်တူညီတဲ့ငွေကြေး၌နေသောသေချာပါစေ။
သင်တစ်ဦးဘဏ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်, ရိုးရှင်းစွာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲသွား။ ဥပမာ, ရေနွေးငွေ့ပိုက်ဆံအိတ်, ဒါမှမဟုတ်တခြားရေနွေးငွေ့ကိုပံ့ပိုးသောအခြားမည်သည့်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ပိုက်ဆံသွင်းထားလေ၏။ ကိုယ်ငွေမဆိုပိုက်ဆံအိတ် (စသည်တို့ကို QIWI, WebMoney) ရက်နေ့တွင်ပြီးသားပါလျှင်, တရားသောဝန်ဆောင်မှု၏နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရည်ညွှန်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။
Method ကို 4: ရုံစောင့်ဆိုင်း
ဒါ့အပြင်ပြဿနာကြောင့် server ပေါ်တွင်လည်းအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်စွန်ပလွံစျေးပေါဂိမ်းများကိုဝယ်ခြင်းငှါလာသောအခါအထူးသဖြင့်မကြာခဏကရာသီအလိုက်အရောင်းကာလအတွင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ အသုံးပြုသူပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသော၏ကြီးမားသောငွေပမာဏပဲဆာဗာထားနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကနိမ်မည်ဖြစ်ပြီးဆာဗာသာမန်စစ်ဆင်ရေးမှပြန်လာကြလိမ့်မည်သည်အထိရုံစောင့်ပါ။ ထိုအခါသင်သည်လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူစေနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် 2-3 နာရီရေနွေးငွေ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြီးနောက်။ သငျသညျစောင့်ဆိုင်းနဲ့တူမခံစားရဘူးလျှင်, သင်စစ်ဆင်ရေးကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့သည်တိုင်အောင်, သည်အထိအနည်းငယ်ပိုပြီးအဆဂိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုးစားနိုင်ပါ။
Method ကို 5: အကောင့် Unlock
မဆိုငွေလွှဲ antifraud (AntiFraud) ကျင်းပသည့်တစ်ဦးချင်းစီစနစ်, ၌တည်၏။ တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည် - သူ့အလုပ်၏အနှစ်သာရထို့နောက်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်ဆင်ရေးကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်, Froud များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတွက်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ AntiFraud သင်တစ်ဦးတိုက်ခိုက်သူဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်လျှင်, သင်ပိတ်ဆို့မည်ဖြစ်ပြီးဂိမ်းကိုဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။
15 မိနစ်ကဒ်3ကြိမ်အသုံးပြုခြင်း;
မြေပုံ antifraud စနစ်များ၏ "အနက်ရောင်စာရင်း" ၌ပေါ်လာသော;
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှသာနည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုရေနွေးငွေ့မည်။ အကူအညီတောင်းပါကရည်ညွှန်းနှင့်အသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖော်ပြရန်အပေါင်းတို့, လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးပါ: လိုအပ်ပါက screenshots များ, အမည်နှင့် msinfo အစီရင်ခံစာများ, ဝယ်ယူ၏သက်သေအကောင့်။ သငျသညျကံကောင်းနေလျှင်, ထောက်ခံမှုလာမည့်2နာရီအတွင်းကိုတုံ့ပြန်နှင့်သင့်အကောင့်သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းပြချက်သော့ခတ်ထဲမှာမပါလျှင်တနည်းအားဖြင့်, လိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်များပေးလေ့ရှိသည်။
Method ကို 6: ကအခြားကူညီပါ
ဂိမ်းသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာမရရှိနိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဖြေဆိုချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုချင်ကြဘူးလျှင်, သင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှအကူအညီတောငျးနိုငျသညျ။ သူကဝယ်ယူမှုစေနိုင်သည်မှန်လျှင်, လက်ဆောင်သကဲ့သို့သင်တို့ဂိမ်းတစ်ခုပို့ပေးရန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုမေးပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှငွေကိုပြန်သွားဖို့ကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
သငျသညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီနိုင်ရန်အောက်ပါနည်းလမ်းမျှော်လင့်အနည်းဆုံး။ သင်ဆဲဂိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်ဆိုရင်, သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုရေနွေးငွေ့ကိုရည်ညွှန်းသင့်ပါတယ်။